25-ka ciyaar ficil ee ugu wanaagsan Android | Androidsis
Ignacio Sala | 11/07/2021 12:00 | Ciyaaraha Android
Ciyaar ahaan in loo arko mid wanaagsan, waa inay soo bandhigtaa farsamo fudud, dareen leh taasna kuma qasbeyso inaan wax aqrinno baaragaraafyada dhaadheer ee qoraalka, ugu yaraan haddii waxa aan raadineyno ay yihiin ciyaaro waxqabad, oo aan ku kala bixin karno daqiiqado yar una gudbi karno wax kale.
Dukaanka Play-ka waxaan gacanta ku haynaa ciyaaro aad u tiro badan oo nooc walba leh, oo ficilku yahay kan ugu badan. Haddii aad raadineyso ciyaaro ficil ah oo aad la dhigatid ama maalmo dhaadheer oo aad ku isticmaasho taleefankaaga casriga ah ee casriga ah ama kiniinigaaga, markaa waxaan ku tusi doonaa waxa ugu fiican ciyaaraha waxqabadka ee Android.
1 Blackmoor 2: Madal Furan
2 Zombie qabsade
4 Zombie lugaynaya 2: Zombie Shooter
5 Dead kiciyaan 2
6 Wicitaanka Duty: Mobile
7 Major Maymen 2: Toogasho iyo Ficil
8 Shadow 2 Dagaallami
10 qoyan weerarkii
11 Naafada Garena
12 Space Marshals 2 iyo 3
15 Saamaynta Genshin
18 Johnny kiciyaan
21 Dagaalkii Dunida 2 - Dagaal Dagaal
22 Qeybta 2
23 Ops casri ah
24 Qoryaha of Boom
25 Arena Fight Arena
Blackmoor 2: Madal Furan
Haddii aad jeceshahay ciyaaraha ficillada iyo isdabamarinta, waa inaadan joojin tijaabinta Blackmoor 2, oo ah nooca cinwaanka iskaashiyo garaacid-em-up ah, halkaas oo ay tahay inaan ka guuleysano cadawgeena ku saleysan dharbaaxo iyo xirfadaha mid kasta oo ka mid ah jilayaasha.
Mid kale oo ka mid ah qodobbada wanaagsan ee cinwaankani waa inay tahay iskaashato badan oo wada shaqeyn ah waqtiga dhabta ah, oo noo ogolaaneysa inaan la dagaallano ilaa 4 ciyaartoy khadka tooska ah. Blackmoor 2 ayaa loo heli karaa in lagu soo dejiyo bilaash, oo ay ku jiraan xayeysiisyada iyo iibsashada barnaamijka.
Developer: Afar Fats Limited
Zombie Catcher waa ciyaar ficil-u-quudhin oo ka dhacda a adduunku in uu ku soo duulay undead. Dadka aan dhiman waxay ku habsadeen meeraha Dunida, laakiin AJ iyo Bud ayaa mahad leh, laba ganacsade oo isku dhexjira oo ku biiraya xoogag, waxay soo qaban doonaan dhammaan zombies-ka si ay mar kale Dhulka u nabad galaan
Ciyaartani waa qayb ka mid ah qaybta Xulashada tifaftireyaasha dukaanka Play Store, sidaa darteed waxaan dooneynaa inaan ka helno cinwaan fantastik ah Zombie Catcher, cinwaan aan si bilaash ah uga soo dejisan karno, oo ay ku jiraan xayeysiisyada iyo iibsashada ku dhex jira dalabka.
Zombie Catcher 🧟 Ugaarsada oo dilaa dadka dhintay
Developer: Ciyaaraha Deca
PUBG waa a classic ciyaaraha royale dagaal, Nooc ka mid ah ciyaarta oo 100 ciyaartoy ay ku degaan jasiirad, waa inay hub raadiyaan oo ay dilaan dhammaan cadawga. In kasta oo nooca PC-ga ay hadheeyeen cinwaano kale oo cusub, sida Warzone ama Apex, nidaamka bey'adda guurguura haddana wali waa boqor.
PUBG Mobile ayaa loo heli karaa adiga soo dejiso gabi ahaanba bilaash. Iibsashada ay dalabku na siinayaan, kaliya waxay na siinayaan bilicsanaanta iyo dhinacyada hubka ee aan waligood ku jirin xirfadaha ciyaartoyda.
MOBILKA PUBG: DIIDAANKA
Zombie lugaynaya 2: Zombie Shooter
Magaca asalka ah gadaashiisa, waxaan ka helnaa a toogashada taas oo ay tahay inaan ku dilno zombies bidix iyo midig inta aan hawlgallada sameyno si aan u helno ilo, u kordhino xirfadaheenna oo aan u helno faa'iidooyin naga dhigaya kuwo awood badan ka geysta kooxaha zombies-ka.
Zombie Socodka 2 ayaa loo heli karaa adiga soo dejiso gabi ahaanba bilaash, waxaa ka mid ah xayeysiiska iyo iibsashada barnaamijka.
Zombie Walking 2: Rooke Zombie
Developer: Ciyaaraha Alda
Nooc kale oo qadiimi ah, haddii aan ka hadalno zombies-ka waa Dhimasho-dhaliye 2, cinwaan kaas oo fayras dilaa ah ayaa ku faafay adduunka waxayna ku keenaysaa isbadal bini aadamka dadka dhexdiisa, taas oo keenta bani aadamnimada qarka u saaran inuu dabar jaro.
Dhimasho kiciya 2 waa ciyaar ka mid ah qofka ugu horeeya ee tooganaya taasi waxay naga dhigeysaa meeshaan tiro badan oo hub ah nooc kasta ha noqotee si aan u soo afjarinno gumaadka zombies ee halista ku ah jiritaankeena. Dead Trigger 2 ayaa loo heli karaa soo dejinta gebi ahaanba bilaash, oo ay ku jiraan xayeysiisyada iyo iibsashada barnaamijka.
GAADI GAADI 2 - toogteha badbaadada Zombie
Developer: Ciyaaraha MADFINGER
Wicitaanka Duty: Mobile
Wicitaanka Waajibaadka Waajibaadka ayaa ku degay aaladaha mobilada dhowr sano ka hor, iyadoo cinwaankeedu yahay, marka lagu daro qaabka dagaalka royale, wuxuu sidoo kale na siinayaa khariidadaha caadiga ah ee xayeysiinta taas oo aan ku wajaheyno cadawga kooxo 5 ah oo ka dhan ah 5.
Wicitaanka Waajibaadka: Moobaylka ayaa loo heli karaa adiga soo dejiso gabi ahaanba bilaash. Iibsashada ay dalabku na siinayaan, kaliya waxay na siinayaan bilicsanaanta iyo dhinacyada hubka ee aan waligood ku jirin xirfadaha ciyaartoyda.
Wacitaanka Duty®: Mobil - Sannad -Labaad
Major Maymen 2: Toogasho iyo Ficil
Cinwaan ah, bilicsanaanta, wuxuu ina xusuusinayaa xayeysiinta birta ee Birta waa Major Maymen 2, oo ah cibaado ficil iyo ficil-cufan leh halkaas oo ay tahay inaan ku dhammeyno cadawgeena bastoolado, qoryo, toogteyaal, qoryaha yar yar, bazookas… si aan u badbaadino adduunka iyo, si kadis ah, halyeeyada uu jecel yahay.
Major Maymen 2 ayaa loo heli karaa adiga soo dejiso gabi ahaanba bilaash, waxaa ka mid ah xayeysiisyada iyo iibsashada ciyaarta. Uma baahna internet in lagu raaxeysto ciyaarta, sidaas darteed waa mid ku habboon markaan safreyno oo aan ku xirneyn internetku noqon karo mid raaxo leh.
Gaashaanle Sare 2: Toogasho iyo Ficil
Developer: Ciyaaraha Rocket Jump
Shadow 2 Dagaallami
Shadow 2 Dagaallami isku qas qaybaha loo siman yahay iyo dagaalka caadiga ah. Ciyaartan waxaan ku qalabeyn karnaa dabeecadeena tiro badan oo hub dilaa ah iyo hub aan caadi aheyn iyo sidoo kale farsamooyin fara badan oo fanka dagaalka ah oo aan ku cadaadinayno cadawgeena.
Ku soco lix adduun oo kala duwan oo ay ka buuxaan jinniyo halista ah ciyaartan door-ciyaarista ah iyo dagaallada adrenaline-kaaga ka dhigaya kun, oo aan awoodno soo dejiso gabi ahaanba bilaash, waxaa ka mid ah xayeysiisyada iyo iibsashada ciyaarta.
In kasta oo aan hadda laga heli karin Dukaanka Play, ma joojin karno ka hadalka Fortnite, mid ka mid ah cayaaraha ay la wadaagaan PUBG caan ku ahaa ciyaarta ciyaarta royale. In kasta oo dhismuhu uu noqon karo mid ka mid ah qodobada taban ee uu leeyahay, haddana haddii aad waxyar barato, muhiim maahan inaad sameysato Taj Mahal si aad isaga difaacdo cadaawayaashaada.
Fortnite ayaa loo heli karaa adiga soo dejiso gabi ahaanba bilaash iyada oo loo marayo Websaydhka Ciyaaraha Epic. Iibsashada ay soo bandhigtay arjiga kaliya waxay na siineysaa bilicsanaanta iyo dhinacyada hubka ee aan waligood lagu darin awoodaha ciyaartoyda.
In Swamp Attack waa inaan ka difaac qolkeena qolafta xoolihii waalan ee na weeraraya. Waxay ku dhejineysaa qashinkeena in ka badan 300 heerar waxaana ku jira qaab ciyaartoy badan. Si aan iskaga difaacno weerarada, waxaan haynaa in ka badan 3 nooc oo hub ah, laga soo bilaabo qoryaha loo yaqaan qoryaha loo yaqaan bambaanooyinka.
Cinwaankan ayaa loo heli karaa adiga soo dejiso gabi ahaanba bilaash, waxaa ka mid ah xayeysiiska iyo iibsashada barnaamijka.
Developer: Outfit7 Xaddidan
Garena Fire Fire sidoo kale waxay na siisaa dagaalka royale mode, laakiin si ka duwan PUBG iyo Fortnite, ciyaaruhu waxay leeyihiin muddo 10 daqiiqo ah taas oo ah inaan ku dilno 49-ka ciyaartoy ee nagula dhacay jasiirad fog.
Dab Bilaash ah ayaa loo heli karaa adiga soo dejiso gabi ahaanba bilaash. Iibsashada ay dalabku na siinayaan, kaliya waxay na siinayaan bilicsanaanta iyo dhinacyada hubka ee aan waligood ku jirin xirfadaha ciyaartoyda.
Garena Dabka Bilaashka ah: Sanadguuradii 4aad
Space Marshals 2 iyo 3
Space Marshals waxaan ka helnaa cinwaan leh aragtida isometric taas oo ah inaynu ka adkaanno cadaawayaasheenna inta ay hawlgalladu socdaan, iyo halka ay tahay inaynu ku muujinno xirfadaheena dagaal, qarsoodi iyo calaamadeyn.
Space Marshals 2 iyo Space Marshals 3 waa waa bilaash, waxaa ka mid ah xayeysiiska iyo iibsashada barnaamijka. Hadaad haysato Google Play Pass, waad ku raaxeysan kartaa cinwaankan bilaash adigoon xayeysiin ama iibsan.
Xuquuqda Rayman waxay naga dhigeysaa meeshaan tiro badan oo ah cinwaanada boosteejada waxqabadka, halkaas oo aan ku muujineyno xirfadeena xakamaynta dabeecada, rukhsad in ka badan 30 sano suuqa ku jirta oo hadda na siineysa 3 cinwaanno kala duwan oo ku yaal Play Store, in kasta oo kaliya Rayman Adventures ayaa loo heli karaa soo dejin bilaash ah.
Gimvalor waa inaan nagula dagaallama jidkeenna gudcurka badan oo ka adkaada cadawga hal-abuurka RPG. Tallaabada ugu horreysa ee cinwaankan ayaa lagu heli karaa bilaash iyo si loo helo inta kale waa inaan isticmaalnaa iibsashada furaya inta ka hartay cinwaanka.
Grimvalor waa waa bilaash, waxaa ka mid ah xayeysiiska iyo iibsashada barnaamijka. Hadaad haysato Google Play Pass, waad ku raaxeysan kartaa cinwaankan bilaash adigoon xayeysiin ama iibsan.
Mid ka mid ah cinwaanadii ugu dambeeyay ee waxqabadka ee lagu dhufto Play Store sanadkii la soo dhaafay oo noqday Hit waa Genshin Impact, oo ah cinwaan wuxuu ina galiyaa aduun cajiib ah oo kaamil ah kaas oo sidoo kale lagu heli karo bilaash, labadaba kombuyuutar iyo konsol.
Hadaad jeceshahay sheekooyinka sayniska iyo qof toogashada koowaad, waa inaad siisaa NOVA Legacy Legacy, cinwaan ku saleysan taxanaha NOVA. Cinwaankan, waxaan iska dhigeynaa kabaha Kal Wardin, halyeeyga badda ee NOVA oo feylal loogu yeeray si uu u isticmaalo hubkiisa dagaalka ee banaanka ee Maamulka Gumaysiga.
Dhaxalka NOVA ayaa loo heli karaa adiga soo dejiso gabi ahaanba bilaash, waxaa ka mid ah xayeysiiska iyo iibsashada barnaamijka.
Haddii aad jeceshahay ciyaaro-door-ciyaaro, waa inaad siisaa Black Desert Mobile isku day, halkaas oo ficilku yahay mid ka mid ah soojiidashada ugu weyn tijaabinta xirfadaheena leh nooc kasta oo jilayaal ah, labadaba dagaalka, sida lo'da beeraha, ugaadhsiga, kalluumeysiga ...
Black Desert Mobile ayaa loo heli karaa adiga soo dejiso gabi ahaanba bilaash waxaana ka mid ah iibsiga gudaha-app.
Haddii aad jeceshahay cayaaraha asalka ah, waa inaad siisaa Johnny Triger isku day a Ciyaar stickman ah oo ficilku aanu waligiis dhammaanayn iyo halka ay hadafkeenu yahay in aan kala furfuro adduunyada maafiyada ah ee dhulka hoostiisa maraya iyadoo la boodayo, la ordayo, la rogayo, la leexinayo oo la keenayo rasaasta bidix iyo midig.
Johnny Triger ayaa loo heli karaa adiga ku soo dejiso bilaash, waxaa ka mid ah xayeysiiska iyo iibsashada barnaamijka.
Johnny Trigger - Ciyaarta toogashada
Magac-bixinta 'Asphalt' laguma waayi karin isku-dubbaridkan isku-dhafka ugu wanaagsan ciyaaraha ficil ahaan. Asphalt 9: Legends waa cinwaanka ugu dambeeya ee rukhsaddan loogu talagalay aaladaha moobaylka, oo aan ku awoodno gawaarida gawaarida ugu dhaqsaha badan uguna qaalisan adduunka iyadoo la tartameysa ciyaartoy kale.
Asphalt9: Halyeeyo ayaa loo heli karaa adiga ku soo dejiso bilaash waxaana ka mid ah xayeysiisyada iyo iibsashada barnaamijka.
Haddii aan ka hadalno gawaarida iyo cinwaanada waxqabadka, kama baaqi karno inaan xusno Carmageddon-kii caadiga ahaa, cinwaan kuma haboona dhagaystayaasha oo dhan taas oo ay tahay inaan ka guuleysano cadawgeenna inta aan ka dul ordayno dad badan intii suurtagal ah. Nooca ciyaartan loogu talagalay Android wax badan kama duwanaan cinwaanka caan ka noqday dabayaaqadii 90-maadkii.
Dagaalkii Dunida 2 - Dagaal Dagaal
Ciyaar xiiso leh oo qofkii ugu horreeyay toogtay waxaa laga heli karaa Dagaalkii Labaad ee Adduunka, ciyaar taas, sida magaceeda ka muuqata, wuxuu dhacayaa dagaalkii labaad ee adduunka halkaasoo aan ku leenahay dhowr hab oo ciyaar oo ka dhacaya 5 xaaladood oo kala duwan, oo ay ku jiraan 6 qaabab badan oo ciyaartoy ah waxayna noo oggolaaneysaa inaan dooranno bangiga u dhexeeya Jarmalka, Mareykanka, Japan iyo Ruushka.
Dagaalkii Labaad ee Adduunka ayaa loo heli karaa adiga ku soo dejiso bilaash, waxaa ka mid ah xayeysiiska iyo iibsashada barnaamijka.
Dagaalkii Dunida 2 - Dagaalkii Dagaalkii (Ciyaarihii Qoryaha)
Developer: Ciyaaraha Edkon GmbH
Waxaad dhihi kartaa Standoff waa kan Counter Strike ee qalabka mobilada, ciyaar na siisa farsamoyaqaano isku mid ah oo toogtahan qadiimiga ah leh khariidado cusub, noocyo cusub oo hub ah iyo qaabab ciyaareed kala duwan oo argagixisadu kula dagaallanto xoogagga gaarka ah.
Heerka 2 ayaa loo heli karaa adiga soo dejiso gabi ahaanba bilaash, waxaa ka mid ah xayeysiiska iyo iibsashada barnaamijka.
Ops casri ah
Cinwaan kale oo leh waxaa u waxyooday Counter Strike waa Ops Casri ah, waa ciyaar badan oo ciyaartoy ah qofka ugu horreeya ee aan gacanta ku hayno in ka badan 30 hub iyo isqarxin ah, ciyaaro 5 ka dhan ah 5, halkaasoo ujeeddada kaliya ee aan leenahay ay tahay inaan cadowga dhammeyno inta uusan sameyn.
Ops casri ah ayaa loo heli karaa adiga soo dejiso gabi ahaanba bilaash, waxaa ka mid ah xayeysiiska iyo iibsashada barnaamijka.
Ops Casri ah: Ciyaaraha Qoryaha - Dagaal FPS oo Online ah
Qoryaha of Boom
Cinwaan kale oo la mid ah Moderns Ops iyo Standoff 2 si cad u waxyooday Counter Strike waa Guns of Boom, waa ciyaar u dhaxeysa kooxaha 4-ta ah ee ka soo horjeeda 4-dagaal iyo halka kaliya hal koox looga hari karo, oo ah kan guuleysta ciyaarta. Si ka duwan Counter Strike, jilayaasha laga heli karo Qoryaha Boom-ka waxay leeyihiin kartiyo kala duwan oo aan uga faa'iideysan karno ku guuleysiga cadawgeena.
Qoryaha Boom ayaa loo heli karaa adiga ku soo dejiso bilaash, waxaa ka mid ah xayeysiisyada iyo iibsashada ciyaarta.
Qoryaha Boom - Online PvP Action
Arena Fight Arena
Shadow Fight Arena waa a 3 ciyaar ciyaar 2D dagaal ah oo leh animations cajiib ah. Waxay sidoo kale na siineysaa suurtagalnimada inaan ku raaxeysano dagaallo badan oo lagula dagaallamayo dadka kale ama ka soo horjeedka sirta farsamada ciyaarta.
Cinwaankan ayaa loo heli karaa adiga soo dejiso gabi ahaanba bilaash, waxaa ka mid ah xayeysiisyada iyo iibsashada ciyaarta, waana mid ka mid ah cayaaraha Play Store ee hoos yimaada qeybta Xulashada Daabacayaasha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » 25-ka kulan ee ugu fiican waxqabadka ee Android